9 Fomba tsara indrindra hakana sarina fiara ampiasaina
Cars & Motorcycles Used Cars
Vonona haka fotoana vitsivitsy? Ny vokatra dia vola bebe kokoa noho ny fiaranao
Sarotra ny maka sary ratsy ny 2015 Lamborghini Huracan. (c) Keith Griffin ho an'ny About.com
Nahita azy ireo izahay: ireo sary ratsy momba ny fivarotana fiara iray. Mora loatra ny maka sary tsara tarehy amin'ny drafitra kely. Tsy mila mpaka sary ianao.
Nahoana no kivy noho ny sarin'ny fiara efa nampiasaina? Izy ireo no fiheverana voalohany hataonao ao anaty tontolo dizitaly mangatsiaka. Ny sarimihetsika tsara dia mametraka ny olona tsindrio amin'ny dokam-barinao na inona na inona vidiny. Ny dokambarotra amin'ny sarimihetsika ratsy dia tsy maintsy ampidirina fotsiny raha tena tsara ny vidiny.
Raha ny marina, raha tsy maka fotoana haka sary tsara ianao dia hahazo vola kely ho an'ny fiara ampiasainao. Tena mila vola be ao anaty paosinao ve ianao? Mora kokoa ny vola laninao amin'ny fiaranao manaraka.
Jereo ny Fotoan'ny Andro
Ny tara-masoandro mivaivay sy ny aloky ny masoandro dia maka sary ratsy. (c) Keith Griffin ho an'ny About.com
Ny masoandro dia zavatra tsara, raha tsy maka sary ny fiara ianao. Avy eo ny masoandro amin'ny mitataovovonana dia hanasa ny jiro amin'ny fiara. Ho sarotra be ny sary. Ny karamanao tsara indrindra dia ny hitifitra angamba antsasak'adiny aorian'ny fiposahan'ny masoandro na angamba ora iray alohan'ny filentehan'ny masoandro. Ny lelany dia mavesatra kokoa ary ny loko dia hijery marefo.
Mitifitra avy eny an-dalamby
Ny 2011 Hyundai Sonata dia nitifitra teo amin'ny latabatra faha-3/4. (c) Hyundai Motors America
Miantehitra betsaka amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiara izay azonao. Raiso sary avy hatrany, avy eo ny lafiny, ary avy eo amin'ny zorony tsirairay amin'ny fiara. Fivarotana fiara iray ampiasaina ? Mitifitovy avy any ambony ny mpividy ka mahita ao am-pandriana. Mila moto moto ve ianao? Maka azy ireo fotsiny raha madio tanteraka ny motera na misy zavatra tsy mahazatra. Raha tsy izany, ny motera dia motera ary sarotra ny manao azy manokana ao anaty sary.
Alaivo sary an-tsaina foana
Toyota 4Runner dia fiara tsara tarehy mandra-panafana azy amin'ny hazavana ratsy. (c) Keith Griffin ho an'ny About.com
Tamin'ny fotoan'ny sarimihetsika taloha, nandrafitra sary Polaroid haingana ireo mpanakanto mba hametrahana ny tifitra. Ataovy mitovy amin'ny sary misy nomerika anao. Raiso ny sary, ary tsinjovy ary tazano izany. Tadiavo ireo singa asongadina ato amin'ity lahatsoratra ity. Manao ahoana ny aloka? Moa ve ny ati-trano misaina?
Diniho ity teboka fanampiny ity: mametaho ny kodi-koditra mba hahitana ny kodiaran'ny fiara eo amin'ny sarinao. Ao anatin'ilay sary etsy ambony dia milamina tsara ireo kodiarana saingy ao anaty aloka lalina ny fiara. Ny dingana manaraka dia manazava ny antony mahatonga izany olana izany.
Jereo ny Shadows
Ny alokaloka diso toerana dia mahatonga ny sary ratsy. (c) Keith Griffin ho an'ny About.com
OK, noho izany dia tsy sary sarin'ny fiara iray ampiasaina ity. Io ilay Chrysler Pacifica 2017 vaovao. Naka tifitra iray aho izay nijanona teo amoron-dalana tany amin'ny toeram-pialan-tsasatra manokana. Misy tsipika mahatsiravina manelingelina ny fiara. Sary ratsy ihany koa ho an'ny anton'izany. Aza manaiky ny fahadisoana amin'ny famelana ny aloka eo amin'ny sary.
Makà dingana iray (na 2) akaiky kokoa
Makà dingana na 2 akaiky kokoa rehefa maka sary fiara. Mampihena ny fikorontanan'ny lozisialy tsy ilaina izany. (c) Keith Griffin ho an'ny About.com
Azo antoka, te-hahazo ny fiara manontolo amin'ny sary ianao. Saingy mila olona ianareo mba hahitany ny antsipiriany momba ny fiaranao. Fenoy ny sarin'ny fiara ampiasainao. Na, fara fahakeliny, mampiasa rindrambaiko fototra momba ny famoronana sary mba hanangonana ny sary akaiky kokoa rehefa tonga ny fotoana handefasana azy io. Ireto misy 11 tsara rindrambaiko fanontana sary ho an'ny Windows. Raha olona Mac ianao, jereo ireo safidy safidy safidy Mozika maimaim-poana.
Araka ny azonao jerena, ao amin'ny sary mihodinkodina ny fiara "manindrona" mihoatra noho ny fotoana itiavana azy voahodidin'ny loto.
Mifantoha amin'ny Cool Elements
Ny afovoan'ny BMW Mini Clubman sy ny teknolojian'ny fahitam-bokony fanadiovana. (c) Keith Griffin ho an'ny About.com
Ny sary etsy ambony dia avy amin'ny rafitra fampitandremana ho an'ny Mini Clubman. Nahafaly ahy be dia be ny sary nataoko tamin'ny jirony izay mamely rehefa manakaiky ny sakana ao ambadikareo. Iza no mila mijery ny any aoriana rehefa manao asa lehibe toy izao ny jiro?
Sarotra amiko ny mamaritra ny teny hoe mahomby io. Na izany aza, sary iray tsotra amin'ity tranga ity dia tena sarobidy an'arivony. Amin'ny fifantohana akaiky amin'ny endri-javatra, dia afaka maneho ny mety ho mpividy ny fahasalamana ianao.
Arovy ny Clutter
Ny Ugh - clutter ao anaty fiara iray ampiasaina amin'ny fivarotana sary dia fahadisoana lehibe. (c) Keith Griffin ho an'ny About.com
Mety ho gaga ianao hoe firy ny olona handefasana dokam-barotra amin'ny sary misy sary vetaveta maloto. Azonao an-tsaina ve? Mangataka baolina baolina baolina kely ihany ianao ao amin'ny fiaranao tahaka ny tompon'io Dodge Neon io . Ireo mpividy any amin'ny banky dia hanao tsinontsinona ny vidin'ny fangatahanao - ary iza no afaka manome tsiny azy ireo? Raha tsy mikarakara tsara ny fikarakarana ny ati-trano ianao, dia azo antoka fa tsy mikarakara ny ivelany na ny lafiny mekanika. Angamba ianao, saingy tsy dia azo inoana loatra.
Aza mampiasa Professional
Ny namako iray dia mpaka sary fiara matihanina. Namoaka sarin'ny fiara nandritra ny am-polo taona. Nandramana nivarotra ny Mercedes tao amin'ny aterineto ary tsy nahazo nibbles, na dia marina aza ny vidiny. Ny sipany, izay notanterahina fa tsy mpaka sary matihanina, naka ny sary ary nanomboka namaly ny olona.
Ny moraly amin'ity tantara ity? Ny mpividy dia miahiahy ny sary matihanina matihanina satria matetika dia midika fa ny sary dia tsy avy amin'ny fiara.
Get a Sticker Window!
2008 Mazda5 sticker. Courtesy KBB.com
OK, noho izany dia tsy toy ny foto-tsarimihetsika fotsiny izany fa ny fahatsapana tsotra fotsiny. Makà fotoana handehanana mankany amin'ny tranonkala ary mamoaka fikandrana varavarankely ho an'ny fiaranao. Ny iray ambony dia ho an'ny 2008 Mazda Mazda5 . Amin'ny ankapobeny dia misy nomeraon-telefaona ny fikandrana varavarankely nefa, tsy misy fahadisoana, navela izany tsipiriany izany aho!
Miaraka amin'ny sticker window of KBB.com, afaka mizara izany ianao amin'ny alàlan'ny media sosialy, izay manohina mahafinaritra.
Top 10 2005 sy 2006 fampiasana fiara Lux Lux
Halaviro ny sangodim-panorenana Craigslist ho mpivarotra mivarotra
Ireo zavatra tokony ho fantatra alohan'ny hividianana Corvette ampiasaina
8 Dingana mba hamitana ny fivarotana fiara iray ampiasaina
Hamarino ny tantaran'ny fiara ampiasaina maimaim-poana
Ahoana ny fampiasana Facebook hividianana ny fiara manaraka ampiasainao
Fiara tsara indrindra ampiasaina ho an'ny ray na reny tokan-tena
Ahoana no fomba fitsapana mitondra fiara iray
Ahoana ny fividianana fiara elektrônika iray ampiasaina
Top 10 Fiara fiara azo antoka
Inona no tokony ho fantatrao momba ny lalàna Lohateny Loholona Oklahoma
Iowa Caucus Mpanolotra
Mankanesa any amin'ny Golf Course
Soso-kevitra ho an'ny Mpitantana mba hanomezana fanohanana ny mpampianatra
Misy fari-pitsipika momba ny fambolena an-tsokosoko ve?
Inona no fahasamihafana misy eo amin'ny fandikan-dalàna sy ny fahotana?
Tous información esencial que debes sobre sobre amerián ciudadanía
Mianatra amin'ny trondro
Teny nalaina momba ny Fandaharan'asan'ny Fikambanana Ifanampiana maneran-tany an'ny Ms. (Mormon)
Ny Vatana Mermaid hita tany amoron-dranomasina
Ny finoanoam-poana momba ny fahafatesana sy ny fahafatesana
Fanamarihan'ny mpanakanto: talenta sy fahaiza-mamorona
Mankalazà Day Thanksgiving
Ny History of Kool-Aid
TColorButton amin'ny lokony
Panth: Fomba ara-panahy an'ny Fikambanana Sikh
Famaritana quantum amin'ny fizika sy ny chimie
Fankalazana ny Oniversiten'i Lindenwood
Inona no atao hoe fandrendrehana?
Sary sy hita
Hira R & B tsara indrindra ho an'ny asa
Top 6 boky momba ny hoavy
Inona no atao hoe mamafisina?